လေယာဉ်တင်သင်္ဘော Ops3နှစ်ပေါင်း6months ago #88
အ Tomcat ပျံသန်းအတွက်အချို့သောအချိန်ရတဲ့ခဲ့သည်
အမေရိကန်လေကြောင်းလိုင်း VA သို့
ပိုင်ရှင် / CEO ဖြစ်သူ
လေယာဉ်တင်သင်္ဘော Ops3နှစ်ပေါင်း6months ago #93
Dino ရဲ့ F-35 အတူကကြိုးစားပါ။
လေယာဉ်တင်သင်္ဘော Ops3နှစ်ပေါင်း6months ago #94
သငျသညျလုံးဝ F-35 မုန်းသူတစ်ဦးသေ-ခက် Tomcat ပန်ကာမှ '' talkin ပါတယ်။ အဘယ်သူမျှမကိစ္စကိုဘယ်လိုဖန်ဆင်း (နှင့်သူအချို့ကောငျးပစ္စည်းပစ္စယတယ်ရဲ့အဖြစ် Dino ဆန့်ကျင် NOTHING င်!) ။ ငါအရမ်းရယ်ရတယ် rl သို့မဟုတ်ဂိမ်းအတွက် F-35 မချစ်ပြီ
လေယာဉ်တင်သင်္ဘော Ops3နှစ်ပေါင်း6months ago #100
ကောင်းပြီအဘို့ငါစင်တာတောင်ပံတည်ဆောက်နှင့်အဘယ်သူမျှမက F-22 င်စဉ်ကဖြစ်ဖို့ရည်ရွယ်ဘယ်တော့မှခဲ့သည်။ လူတွေကမစ်ရှင်လုပ်နေတာ၏လမ်းရဲ့နားလည်သဘောပေါက်လာတဲ့အခါအမွေတိုက်လေယာဉ်ထက်ကွဲပြားခြားနားသည်ထို့နောက်သူတို့ကအနည်းငယ်ပိုပြီးမေတ္တာပေလိမ့်မည်။ ကမှာဤနည်းကြည့်ရှု F-15 (ကြောင့်ကိုယ်ပျောက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်) F-22 ထက်ဒီဇိုင်းအားဖြင့်ပိုမြန်ပေမယ့် (အကွာအဝေး မှလွဲ. ) နေ့စဉ်လမ်းအတွက်နေဆဲယုတ်ညံ့သည်။ B-1A B-1B ထက်ပိုမြန်ခဲ့ပေမယ့်ခသည်အခြားလမ်းအတွက် သာ. ကောင်း၏။ ဒါကြောင့်တခါတရံတွင်သင်သည်အခြားသူများကိုရဖို့ရန်တစ်ခုခုယဇ်ပူဇော်ခြင်းအဖို့ရှိသည်။
လေယာဉ်တင်သင်္ဘော Ops3နှစ်ပေါင်း6months ago #103
ကျွန်မနည်းနည်းဟောင်းဖက်ရှင်ပေါ့အရမ်းရယ်ရတယ်ငါသေဆုံးနေ့ကိုသေးပါဘူးတဲ့ Tomcat သည်လူဖြစ်လိမ့်မယ်။ ငါအရှိဆုံး Helos တူသောလုပ်ပေးနေချိန်မှာအခုတော့ .... ငါလုံးဝအဆိုပါ Osprey LOVE ။ (အကောင်းတိုင်းတာဘို့အတွက်ပစ်ချအချို့အလှအပနှင့်အတူ) ထိုကလေးအတွက်နှစ်ဦးစလုံးကမ္ဘာ၏အကောင်းဆုံး။
0.275 စက္ကန့်: စာမျက်နှာကိုဖန်တီးရန်အချိန်